Asetenam Nsɛm: Yɛayɛ Krado sɛ Yɛbɛsom Yehowa Wɔ Baabiara | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Yɛayɛ Krado sɛ Yɛbɛsom Yehowa Wɔ Baabiara
Markus ne Janny Hartlief anom asɛm
Na me nko ara menkɔɔ asɛnka da. Da biara a mɛkɔ asɛnka no, ehu tumi ka me araa ma me nan kokom nyinaa wosow. Nea ɛsɛee asɛm no koraa ne sɛ na nkurɔfo ani nnye asɛm no ho. Na ebinom mpɛ m’anim ahwɛ koraa, na ɛtɔ da bi a na wɔpɛ sɛ wɔboro me. Bosome a edi kan a mehyɛɛ akwampae adwuma ase no, nhomawa biako pɛ na memae!—Markus.
ASƐM a mereka yi sii afe 1949. Mfe 60 atwam nanso mede wo bɛkɔ akyi asen saa. Yɛfrɛ me papa Hendrik; na ɔyɛ mpaboa san yɛ turom adwuma wɔ Donderen. Ɛyɛ kurow ketewa bi a ɛwɔ Drenthe atifi wɔ Netherlands. Wɔwoo me wɔ hɔ afe 1927. Na yɛyɛ mmofra baason; me na na meto so anan. Na yɛn fie no wɔ mfutukwan ho. Na kurom hɔfo dodow no ara yɛ akuafo, na na me nso m’ani gye kuadwuma ho. Afe 1947 na metee nokware no ho asɛm fii Theunis Been hɔ. Saa bere no na madi mfe 19. Na Theunis te yɛn mpɔtam hɔ, na bere a edi kan a mihyiaa no no, na mempɛ n’asɛm. Nanso Wiase Ko II akyi pɛɛ no, ɔbɛyɛɛ Yehowa Dansefo. Efi saa bere no mihui sɛ wasesa koraa; na n’anim tew sen kan no. Bere a mihui sɛ wasesa saa no, ɛyɛɛ me nwonwa enti bere a ɔkae sɛ Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ asase yi bɛdan paradise no, mitiei. Mantwentwɛn me nan ase koraa na migyee nokware no, na efi saa bere no me ne Theunis bɛyɛɛ nnamfo. *
Mifii asɛnka ase May 1948, na bosome a edi hɔ ara, June 20 no, mebɔɔ asu wɔ nhyiam bi ase wɔ Utrecht. January 1, 1949 na mifii akwampae adwuma ase, na wɔde me kɔɔ Borculo wɔ Netherlands apuei. Asafo ketewa bi na na ɛwɔ hɔ. Na metwa bɛyɛ kilomita 130 (kwansin 80) ansa na madu hɔ, enti meyɛɛ m’adwene sɛ mede baesekre bɛkɔ. Na misusuw sɛ metumi de nnɔnhwerew 6 adu hɔ nanso osubran ne mframa dennen nti, na ɛnyɛ mmerɛw saa. Bere a mekaa baesekre no duu baabi no, mefaa keteke twaa kilomita 90 (kwansin 55) a aka no. Akwantu no nyinaa gyee me nnɔnhwerew 12. Mikodui na ade asa. Mekosoɛɛ Adansefo bi, na metenaa wɔn nkyɛn yɛɛ akwampae adwuma no.
Ɔko no akyi no, na ohia wɔ baabiara. Na atade a mewɔ ara ne suit biako ne trɔsa biako; na suit no so sen me ɛnna trɔsa no yɛ tiatiaa. Sɛnea madi kan aka no, bosome a edi kan no manhu nneɛma ani so yiye wɔ Borculo, nanso Yehowa boaa me ma minyaa nnipa pii ne wɔn suaa Bible. Midii bosome akron wɔ hɔ, na afei woyii me kɔɔ Amsterdam.
MIFII AKURAASE KƆƆ KUROM
Obi a yɛatete me wɔ akuraase, me na afei de mabepue Netherlands kuropɔn Amsterdam mu yi! Na ɛhɔ asɛnka yɛ dɛ. Bosome a edi kan no memaa nhoma sen bosome akron a midii wɔ Borculo nyinaa. Ankyɛ na minyaa nnipa bɛboro baawɔtwe ne wɔn suaa Bible. Wɔpaw me sɛ asafo somfo (nea seesei wɔfrɛ no mpanyimfo ntam nkitahodifo no), ɛno akyi no wɔmaa me baguam ɔkasa sɛ memma. Na memmaa baguam ɔkasa da, enti na me yam hyehye me paa. Nanso aka kakra ma adu me so no, woyii me kɔɔ asafo foforo mu. Afei me koma tɔɔ me yam. Na minnim sɛ merebɛma baguam ɔkasa bɛboro 5,000 wɔ me som adwumam!
Markus (nifa so nohoa) redi adanse wɔ abɔnten so wɔ Amsterdam, 1950
May 1950 mu no, woyii me kɔɔ Haarlem. Afei wɔtoo nsa frɛɛ me sɛ menkɔyɛ ɔmansin adwuma. Mantumi anka m’ani angu so nnansa. Meka kyerɛɛ Robert Winkler a na ɔsom wɔ Betel sɛ minnye nni sɛ metumi ayɛ adwuma no. Nanso ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Wo de, hyehyɛ nkrataa no bra. Wubesua.” Ankyɛ na wɔmaa me ntetee bosome biako na mifii ase somee sɛ ɔmansin somfo (ɔmansin sohwɛfo). Bere a mekɔsraa asafo bi no, mihyiaa ababaa bi a ne ho yɛ anika a wɔfrɛ no Janny Taatgen. Na ɔyɛ kwampaefo mmɔdenbɔfo a ɔdɔ Yehowa. Yɛwaree afe 1955. Ansa na mɛtoa asɛm yi so no, mɛma Janny kwan ma waka nea ɛyɛe a ɔbɛyɛɛ ɔkwampaefo ne nea ɛyɛe a yehyiae.
YƐN AWARE AKYI
Janny: Me maame bɛyɛɛ Ɔdansefo 1945 mu. Saa bere no na madi mfe 11. Ohui sɛ ehia sɛ ɔne ne mma baasa no sua Bible. Nanso na me papa mpɛ nokware no koraa, enti sɛ onni fie a na me maame kyerɛkyerɛ yɛn.
Mekɔɔ ɔmantam nhyiam bi wɔ Hague afe 1950; ɛno ne bere a edi kan a mekɔɔ Yehowa Adansefo nhyiam. Nnawɔtwe biako akyi no, mekɔɔ asafo nhyiam a edi kan wɔ Ahenni Asa so wɔ Assen (Drenthe). Me papa bo fuwii paa na ɔpam me fii fie. Me maame ka kyerɛɛ me sɛ, “Wunim baabi a ɛsɛ sɛ wokɔ.” Nea na ɔrepɛ akyerɛ ne sɛ menkɔ me nuanom Yehowa Adansefo hɔ. Midii kan ne Adansefo bi a wɔte yɛn mpɔtam hɔ kɔtenae, nanso na me papa ani da so ara sa me. Enti mifii hɔ kɔɔ asafo bi mu wɔ Deventer (Overijssel). Na efi baabi a yɛte rekɔ hɔ yɛ kilomita 95 (kwansin 60). Aban mpanyimfo ne me papa dii sɛ wapam ne ba kumaa afi fie, enti ɔka kyerɛɛ me sɛ mensan mmra fie. Me papa ammegye nokware no da, nanso eduu baabi no ɔmaa me kwan sɛ menkɔ asafo nhyiam nyinaa ne asɛnka.
Janny (nifa so nohoa) reyɛ akwampaefo boafo wɔ 1952 mu
Mesan baa fie no, ankyɛ na yare kɛse bi bɔɔ me maame, enti fie nnwuma nyinaa beguu me so. Eyi nyinaa akyi no, meyeree me ho wɔ Yehowa som mu na mebɔɔ asu 1951. Saa bere no na madi mfe 17. Akyiri yi me maame ho tɔɔ no, enti afe 1952 mu no meyɛɛ akwampaefo boafo bosome abien; me ne anuanom mmea akwampaefo baasa na ɛyɛe. Yɛde hyɛmma bi na ɛyɛɛ yɛn fie, na yɛkaa asɛm no wɔ nkurow abien mu wɔ Drenthe. Mebɛyɛɛ daa kwampaefo afe 1953 mu. Afe biako akyi no, ɔmansin sohwɛfo aberante bi bɛsraa yɛn asafo. Ɔno ne Markus. Yehui sɛ yɛware a yebetumi ayɛ pii wɔ Yehowa som mu, enti yɛwaree May 1955.—Ɔsɛnk. 4:9-12.
Ɛda a yehyiaa ayeforo wɔ 1955 mu
Markus: Yɛwaree no, wɔde yɛn kɔɔ Veendam (Groningen) ma yɛkɔsomee sɛ akwampaefo. Na yɛte dankora ketewa bi mu. Nanso Janny siesiee dan no mu fɛfɛɛfɛ ma emu yɛɛ ahomeka. Anadwo biara yɛrebɛda a, yepiapia yɛn pon ne nkongua nketewa abien bi a ɛwɔ dan no mu si baabi na yɛatwe yɛn mpa asi hɔ.
Bosome asia akyi no, wɔma yɛkɔyɛɛ akwantu adwuma wɔ Belgium. Afe 1955 no, na adawurubɔfo bɛyɛ 4,000 pɛ na ɛwɔ ɔman no mu. Seesei wɔn dodow abu abɔ ho mpɛn asia! Flanders wɔ Belgium atifi fam, na nnipa a wɔwɔ hɔ ne Netherlandsfo ka kasa biako. Nanso ɛsono sɛnea Belgiumfo ka no, enti egyee bere ansa na yɛrete wɔn kasa no.
Janny: Na akwantu adwuma no gye ahofama. Sɛ yɛrekɔsra asafo bi a, na yɛtena yɛn sakre so. Afei nso yekodu hɔ a, na yɛtena anuanom fie. Yɛsom asafo bi wie a na yenni baabi a yɛbɛkɔ akɔtena, enti na yɛtena hɔ kosi Benada anɔpa na yɛafi hɔ akɔ asafo foforo mu. Nanso yehui sɛ adwuma no ankasa yɛ nhyira a efi Yehowa hɔ.
Markus: Yɛkɔɔ hɔ foforo no na yennim onua anaa onuawa biara wɔ asafo ahorow no mu, nanso na wɔn yam ye na na wɔpɛ ahɔhoyɛ. (Heb. 13:2) Mfe dodow a yedii wɔ hɔ no, yɛsrasraa asafo ahorow a wɔka Dutch kasa wɔ Belgium no mpɛn pii. Eyi ma yenyaa nhyira pii. Ɛkame ayɛ sɛ yehuu anuanom mmarima ne mmea a wɔwɔ Dutch asafo ahorow no nyinaa mu. Afei nso mmofra pii a yɛkɔtoo wɔn no anyinyin anya nkɔso wɔ Yehowa som mu ahyira wɔn ho so ama Yehowa, na wɔde Ahenni no di kan wɔ wɔn asetenam. Nea ɛyɛ anigye koraa ne sɛ wɔn mu pii de wɔn bere nyinaa som Yehowa. (3 Yoh. 4) Obiara ‘nya nkuranhyɛ fi ne yɔnko hɔ,’ enti ayɛ mmerɛw ama yɛn sɛ yebefi yɛn koma nyinaa mu ayɛ yɛn som adwuma no.—Rom. 1:12.
NA ASƐM NO YƐ DEN, NANSO NA NHYIRA WOM
Markus: Efi da a yɛwaree no, na ade a ɛda yɛn koma so ara ne sɛ yɛbɛkɔ Gilead Sukuu. Enti da biara na yɛde dɔnhwerew biako sua Borɔfo kasa. Nanso yehui sɛ, sɛ yɛbɛhwɛ nhoma mu asua Borɔfo a, ɛnde mfe ahe koraa a na yɛte nea yɛte. Enti yɛyɛe sɛ yɛde yɛn akwamma bere bɛkɔ England akɔyɛ asɛnka adwuma no na yɛasua kasa no. Afei 1963 mu no, yɛn nsa kaa nkrataa abien fii yɛn adwumayɛbea ti wɔ Brooklyn. Na biako yɛ me dea, ɛnna biako yɛ Janny dea. Wɔka kyerɛɛ me sɛ menkɔ sukuu titiriw bi a wɔbɛyɛ no bosome du wɔ Gilead. Na sukuu no atirimpɔw ne sɛ ɛbɛtete anuanom mmarima ma wɔahu sɛnea wɔbɛtoto nneɛma wɔ asafo no mu. Wɔtoo nsa frɛɛ anuanom 100; emu 82 yɛ mmarima.
Janny: Me krataa no de, na nea wɔreka akyerɛ me ara ne sɛ minsusuw ho nhwɛ sɛ metumi atena Belgium ma Markus akɔ Gilead anaa. Momma menka, mfiase no ɛhaw me paa. Na akɔyɛ te sɛ nea Yehowa antie me mpaebɔ. Nanso mesan hwɛɛ asɛm no dinn, na mihui sɛ nea enti a Gilead Sukuu wɔ hɔ ne sɛ ɛbɛtete anuanom ma wɔatumi aka asɛmpa no wɔ wiase nyinaa. Enti mepenee so sɛ mɛtena Belgium, na wɔyɛɛ me ɔkwampaefo titiriw wɔ Ghent. Wɔde me kɔkaa Anna ne Maria Colpaert ho. Na wɔyɛ akwampaefo titiriw a wɔayɛ adwuma no akyɛ.
Markus: Esiane sɛ na me Borɔfo nka papa nti, wɔma mekɔɔ Brooklyn bosome anum ansa na sukuu no refi ase. Meyɛɛ adwuma wɔ Ɔsom Dwumadibea, na na meboa ma wɔde nhoma mena anuanom wɔ Asia, Europe, ne South America. Sɛ wowɔ adwumayɛbea ti na woreyɛ adwuma a, wuhu paa sɛ yɛwɔ anuanom wɔ wiase nyinaa a yɛabom resom. Onua a mekae no paa ne Onua A. H. Macmillan; na ɔyɛ ɔhwɛfo kwantufo wɔ Onua Russell bere so. Saa bere no na wabɔ akwakoraa na na n’asom yɛ den, nanso da biara na ɔkɔ asafo nhyiam. Eyi kaa me koma paa na mihui sɛ ɛsɛ sɛ yɛne yɛn nuanom Kristofo hyiam daa.—Heb. 10:24, 25.
Janny: Na me ne Markus taa kyerɛw yɛn ho. Na obiara afe ne yɔnko. Nanso na Markus ani gye nea ɔresua wɔ Gilead no ho, na na me nso m’ani gye wɔ asɛnka adwuma no mu. Bere a Markus fi United States baa fie no, na me ne nnipa 17 na esua Bible. Na ɛnyɛ mmerɛw sɛ Markus bɛkɔ akodi bosome 15 wɔ baabi a minhu n’anim, nanso Yehowa hyiraa yɛn. Ɛda a Markus resan aba no wimhyɛn no ammedu ntɛm, enti bere a afei obedui no, yɛbam yɛn ho; meresu no na Markus nso resu. Efi saa bere no, obiara nnyaw ne yɔnko hɔ nkɔ baabiara da.
YƐN ANI SƆ HOKWAN BIARA A YƐANYA
Markus: December 1964 na mifi Gilead bae, na wɔma yɛkɔsom wɔ Betel. Nanso na yennim sɛ yɛrekotwam wɔ hɔ kɛkɛ. Yɛkɔɔ hɔ no, bosome abiɛsa pɛ na wɔma mekɔyɛɛ ɔmantam sohwɛfo wɔ Flanders. Akyiri yi wɔde asɛmpatrɛwfo bi baa Belgium. Na wɔfrɛ wɔn Aalzen ne Els Wiegersma, na wobesii yɛn anan yɛɛ ɔmantam adwuma no. Afei yɛsan kɔɔ Betel na mekɔyɛɛ adwuma wɔ Ɔsom Dwumadibea. Efi 1968 kosi 1980 no, na yɛntena faako; yɛsom wɔ Betel kakra, na yɛakɔyɛ akwantu adwuma kakra. Afei efi 1980 kosi 2005 no, mesomee sɛ ɔmantam sohwɛfo.
Ɛwom, na wɔsesasesa yɛn dwumadi nanso na yɛma ɛtena yɛn adwenem bere nyinaa sɛ yɛahyira yɛn ho so ama Yehowa sɛ yebefi yɛn kra nyinaa mu asom no. Enti adwuma biara a wɔde maa yɛn no, yeyii yɛn yam yɛe efisɛ na yenim sɛ baabi a wɔde yɛn bɛkɔ biara, adwene a ɛwɔ akyiri ne sɛ ɛbɛboa ma Ahenni adwuma no akɔ so.
Janny: Hokwan biako a minyae a ɛmaa m’ani gyei ne bere a me ne Markus kɔɔ Brooklyn 1977 ne bere a yɛkɔɔ Patterson 1997 ma Markus kogyee ntetee a wɔde maa Baa Boayikuw mufo no.
YEHOWA NIM NEA YEHIA
Markus: Janny kɔyɛɛ oprehyɛn afe 1982, na ofii mu fii maa ne ho tɔɔ no kama. Mfe abiɛsa akyi no, Louvain asafo no maa yɛn dan bi wɔ wɔn Ahenni Asa no atifi. Mfe 30 a na yɛde ayɛ adwuma yi nyinaa, eyi ne bere a edi kan a yenyaa baabi a yebetumi aka sɛ ɛyɛ yɛn dea a yetumi kɔ ba bɛsoɛ hɔ. Edu Benada na yɛrekɔ akɔsom asafo bi a, midi aborɔsan yi so aforosiane mpɛn pii twe yɛn nneɛma ba fam. Anigyesɛm ne sɛ afe 2002 mu no, wɔpɛɛ dan bi wɔ fam hɔ maa yɛn. Bere a midii mfe 78 no, wɔma yɛkɔyɛɛ akwampaefo titiriw wɔ Lokeren. Yɛn ani agye sɛ yɛreyɛ saa adwuma yi na da biara yetumi kɔ asɛnka.
“Yenim sɛ ɛnyɛ baabi a yɛresom anaa hokwan a yɛwɔ ne asɛm no, na mmom nea ehia ne onii a yɛresom no”
Janny: Yɛka mfe dodow a yɛn baanu de ayɛ bere nyinaa som adwuma no bom a, ɛboro mfe 120! Yehowa aka sɛ ‘ɔrennyaw yɛn’ na sɛ yɛde nokwaredi som no a, ‘hwee renhia yɛn.’ (Heb. 13:5; Deut. 2:7) Yɛahu paa sɛ saa asɛm no yɛ nokware.
Markus: Bere a yesusua na yehyiraa yɛn ho so maa Yehowa. Yɛanhwehwɛ nneɛma akɛse akɛse. Dwumadi biara a wɔde maa yɛn no, yesoo mu, efisɛ yenim sɛ ɛnyɛ baabi a yɛresom anaa hokwan a yɛwɔ ne asɛm no, na mmom nea ehia ne onii a yɛresom no.
^ nky. 5 Akyiri yi me papa, me maame, me nuabea panyin ne me nua mmarima baanu bɛyɛɛ Adansefo.